P! NK: KONKE ENDIKWAZIYO UKUZA KUTHI GA NGOKU: ULUHLU LOKUHLOLWA KWEALBHAMU - IINDABA
Konke endikwaziyo ukuza kuthi ga ngoku: Uluhlu oluhleliweyo
Imvumi yomculi uyila ifa lakhe ngoxwebhu olutsha kunye nealbham ebonakalayo kukhenketho lwakhe lwango-2019. Njengomdlali weqonga, uyonwabile kwaye ukhululekile, nokuba umculo wakhe omtsha uziva ngathi yindlela yokufikelela esiphelweni.
izitshixo zealicia icwecwe elitsha
Kwenye indawo, kunomathotholo othile, ingoma ye-P! Nk iyadlala-oko kuyinyani kule minyaka ingama-20 idlulileyo. Wavula i-NSYNC, emva koko wabakhupha; Ubhale ubuthathaka obumangalisayo I-ballad echasene noBush kunye namantombazana e-Indigo, kwaye umsebenzi wakhe wawongamela lo mongameli; yena ubambisene nemvumi ephambili webhendi ephelelwe lixesha yolonwabo. ekuphakameni kokuthandwa kwayo, kwingoma eqhubeka nokudlala kunomathotholo; yena wayenxibe iiglass ezinkulu kwaye walingisa ukubamba ibrashi yamazinyo emqaleni ukuhlekisa EParis Hilton I-archetype yodumo lwabasetyhini, kwaye yahlala ixesha elide ilungile kunezo zombini i-Hilton kunye ne-anti-Hilton backlash. Umculo weP! Nk uhamba phakathi kokuzibhubhisa kunye novelwano, ibhalansi ebethekileyo ukusukela kwi-albhamu yakhe yokuqhekeka M! Sndazazwered Ngo-2001. Emva koluhlu lwezitetimenti zobukrwada kunye nokukhalela uncedo, elungiselelwe ixabiso lokothuka (Ootishala babendithandile / Abazali bam bandithiyile), wakhela kwisicelo: Ndiyingozi kum / Ungandivumeli . Kwialbham ebizame ukungqina ubungozi okanye ukonakala okanye ukonakala komculi oneminyaka engama-22 ubudala — zonke iisokisi ezimdaka neeringi zedayimani, izikweko ezichaza ubuntwana bakhe njengeVietnam yam — Ungandivumeli ukuba Yiyingoma eyothusayo . Kuhlala kukho ukuthamba ngequbuliso kwimizila yeqela lakhe, okanye eluhlaza, ubhedu ecaleni kweebhaladi zakhe.
IP! Nk iyila ifa layo ngoku, kwaye ishishini liyambhiyozela ngokunamathela. NgeCawa, uBillboard wamnika ibhaso layo Icon , kwiintsuku emva kokuba iAmazon ikhuphe uxwebhu, P! Nk: Yonke into endiyaziyo ngoku , kulandela ukhenketho olukhulu lwase-2019 lwaseYurophu emva kwe-albhamu yakhe ye-2017 Intlungu entle. Kwiminyaka yakutshanje, iP! Nk iye yaziwa njengendawo yokuzonwabisa eyonwabisayo, esenza izigqi kunye nokucula ngeendlela eziqhelekile zokuqamba. Ifilimu igxile kwisigqibo sakhe sokuzisa abantwana bakhe abancinci njengoko wayeziqhelanisa kwaye esenza; baqhayisa ngasemva kokuziqhelanisa kwakhe, banxibe ilweyile kwaye bakhukhumele ngexilongo elingasemva. Ndifuna ukhenketho lufezeke kuye wonke umntu ohamba ngale minyango ephethe itikiti ezandleni zabo, uP! Nk ngelo xesha, kodwa ndifuna ukuba igqibelele ezingqondweni zabantwana bam. Kwaye ndiyazibulala ndizenze zombini.
Obo bunzima buhamba phezu kwefilimu ehamba kunye necwecwe eliphilayo, elishiya ezinye zeengoma ezinamandla zeP! Nk kwaye endaweni yoko libeka indawo yalo kwikhonsoli yomculo esikufutshane nepunk, iphikisa ukuba ukuba ngumama kuyahambelana ngokusisiseko nophawu lwayo olunamanzi emvukelo. Konke endikwaziyo ukuza kuthi ga ngoku: Uluhlu oluhleliweyo Ixinene ngamaqweqwe amatye, amanye aphumelele ngakumbi kunamanye. Ubopha inguqulelo engathandabuzekiyo Yintombazana nje ekusebenzeni kwengoma yakhe ka-2008 yeFunhouse, ethi icinezele ubuyatha bezifaniso zikaP! Nk (Le yayiqhele ukuba yindawo yokuhlekisa / kodwa ngoku izele ngamaclowns amabi) kwaye Iqaqambisa ifuthe elicacileyo likaGwen Stefani. Okuchulumancisayo kukuthatha kwakhe iBohemian Rhapsody, ehamba phantsi kobunzima bomsitho ngaphandle kokongeza okuninzi koqobo.
Njengomdlali weqonga, i-P! Nk iyonwabisa kwaye ibrash kwaye ikhululekile. Ndiwalibele amagama, uyakhalaza ngokurekhoda intsebenziswano yakhe yeNate Ruess, i-sappy mallcore duet Ndiphe nje Isizathu. Yijikeleze loo nto, ithi, kwaye icele ukwenzelwa ngaphezulu. Ndiyayithanda loo ngoma. Uyabhabha kwaye ucime ukubetha ku-Who Knew, echitha ngaphezulu kwemida yengoma, kwaye ekuphazamisweni kwamazwi aphelisa izixhobo-ndizakukugcina uzivalele entlokweni yam, uyangxola, de sidibane kwakhona. Xa ebhinqile, ilizwi lakhe eli-raspy liqhele ukukrwela amanqaku, ngamanye amaxesha liyangcangcazela yimvakalelo. Ndiyaphila, uyakhala ku-What What, convincing himself in real time, ndilungile fiiine . KwiPilisi NjengePilisi, enye yeengoma ezintle awazibhalayo, abaphulaphuli bayangxama ukuze bazalise izikhewu xa eyeka; ukurekhodwa kuba luxwebhu lwale mfuno idibeneyo, igcisa kunye nabaphulaphuli besebenza ngokulandelelana ukuqinisa ingxelo yonyamezelo.
Ibali u-P! Nk afuna ukulixela kukuba ungumkreqi, njengoko ephola kwingoma yesihloko-ulongezo olutsha lwe-albhamu, egxile ekuxhotyisweni kwabasetyhini-kwaye uhlala phambi kwamaxesha. Kodwa enyanisweni iP! Nk inguquko encinci; uhlaziye umculo wakhe kunye nomyalezo wakhe ngeendlela ezibonakala ngathi zisuka entliziyweni kwaye ziyathandwa sisibheno esikhulu. I-albhamu ibandakanya i-2017 yakhe yentsholongwane intetho yokwamkela ngembasa ye-MTV Michael Jackson Vanguard yeVanguard, ethe kratya emva kwengoma, kwaye kuyo ukhumbula ethetha nentombazana yakhe eneminyaka emithandathu ubudala malunga nobuthi bemigangatho yobuhle kunye nenkululeko kwi-androgyny. Ihlombe liphelela kwingoma elandelayo, ukubetha kwe-EDM evela kwiCash Cash ukubetha phantsi kwee-snippets ezivela kudliwanondlebe oludlulileyo lwe-P! Nk-ndifuna ukwazi ukuba iintlungu zam ziyayinceda intlungu yakho, utshilo, njengamavili abethayo kunye nokuhla. Imiyalezo ibonisa kwiingoma ezintsha zealbham, ezibonakala ngathi azingomhobe wabo bacinezelekileyo kwaye zifana neenqanawa zeengxelo zeP! Nk ezifuna ukuzenza ngoku. Kwimiboniso yeBillboard, yena kunye nentombi yakhe eneminyaka esithoba ubudala baxhonywa bexhonyiwe emoyeni njengoko babesenza iCover Me eSunshine. Isigingci sidlala kwindawo ethile ekwiskrini, isiteyi esisezantsi nesilibalekayo. Bajikeleza ngaphezulu kweqonga kwaye batswina malunga namaxesha amnandi. U-P! Nk ujikeleze waya kwintombi yakhe kwaye amabunzi abo acinezelwe kunye. Yenye yeengoma ezibuthathaka kwikhondo lakhe lomsebenzi; Isenokuthetha ezona zininzi.
Iincwadana ezinemifanekiso eziluhlaza ezininzi
Thatha yonke iMigqibelo nge-10 yee-albhamu zethu eziqwalaselwe kakuhle kule veki. Bhalisela i-10 yokuva incwadi yeendaba apha.
ynw ixesha elingakanani ejele
Uphononongo lomboniso wedanny brown
ukungcakaza kobuntwana kwi-albhamu yokugqibela
I-astra taylor jeff mangum